[Khariidad] Madaxweynaha Tuniisiya: Miyay asalka juquraafi ahaan musharixiintu saamayn ku yeelan doonaan codaynta? - YoungAfrica.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » SIYAASADDA [Card] Doorashadii madaxweynenimada ee Tuniisiya: Miyay asalka juquraafi ahaan musharixiintu saamayn ku yeelan doonaan codeynta? - YoungAfrica.com
Ka mid ah murashaxiinta u tartamaya doorashada madaxweynaha ee 15 Sebtember, toban murashax oo ku saabsan 26 waxay ka yimaadeen caasimada Tunis. © Afrikaanka yar
Inta badan laga soo bilaabo Sahel kadib xornimada, hogaamiyaasha Tunisiya, tan iyo kacaankii 2011, waxay si aad iyo aad ah uga socdaan caasimada Tunis. Murashaxiinta u tartamaya doorashada madaxweynaha ee axada kama horyimaadaan dhaqankan cusub. Maxuu ahaa cawaaqibta codbixinta? Falanqaynta.
Habib Bourguiba wuxuu ahaa ina Monastir xeebta bari Zine el Abidine Ben Ali Hammam Sousse, qiyaastii soddon kiiloomitir waqooyiga. Tan iyo xorriyadda, maahan madaxweynayaashii waddanka oo keliya ee ka soo baxay xeebtan mudnaanta leh ee loo yaqaan 'Sahel'. Wasiiro badan iyo shaqaale dowladeed ayaa sidoo kale ka yimid gobolkan, oo ah goob saameyn ku leh iyo goob taranta siyaasad ahaan, kuwaas oo inbadan ka faa'iideystay faa iidooyin dhaqaale.
Sikastaba, tan iyo kacaankii, baahinta Sahelianka waxay bilaabeen inay baabi'iyaan. Markaa waan aragnay Waa Madaxweynihii Tuniisiya, goor dambe Beji Caid Essebsi, ku guuleysto doorashada madaxweynaha ee 2014. Wuxuu yimid 2016 madaxa dowladda, Youssef Chahed, oo ah murashaxa haatan u taagan xafiiska ugu sareeya, sidoo kale waxay ka timaadaa wareegyada mudnaanta leh ee caasimadda. Been-abuurista qaar ka mid ah dadka Sahiiliyiinta ah, halka qaar kalena ay leeyihiin qaybahaa hore ee hore uma baahna hadda. Marka waa sidee meesha maanta la siinayo asalka juquraafi ahaaneed ee u-bannaaneyaasha loo yaqaan Carthage?